Basikety TOURNOI FIHAVANANA Analanjirofo Tompondakan’ny andiany faha-4 ny 2Bc ny Ascut
Tontosa ny faran’ny herinandro teo tany Fenoarivo Atsinanana ny fifaninana basikety Tournoi Fihavanana andiany faha-4 nokarakarain’ny ligy rejionalin’ny basikety any Analanjirofo tarihan’ny filohany, Rtoa Juliana Rabarijaona.
Tamin’ny vokatra ankapobeny azo dia fantatra fa nanao poa-droa ny ekipan’ny 2 Bc Vakinankaratra fa norombahin’izy ireo avokoa ny anaram-boninahitra Tompondakan’ny Tournoi Fihavanana andiany faha-4 teo amin’ny sokajy U 18 zatovolahy sy teo amin’ny sokajy Open vehivavy : Vbc # Texas Rangers (85-67), Cmmf # 2Bc (31-38). Ny ekipan’ny Ascut Toamasina kosa no nandrombaka ny anaram-boninahitra teo amin’ny sokajy Open lehilahy : Ascut # 2Bc (90-81). Voahosotra ho mpilalao mendriky ny sokajy U 18 lehilahy i Tahiry Bolo n°4 avy amin’ny klioban’ny 2Bc. I Stéphanie n°12 avy amin’ny klioba Kinger’s Soanierana Ivongo kosa teo amin’ny sokajy Open vehivavy ary Olivier n°13 avy amin’ny klioban’ny Ascut Toamasina kosa teo amin’ny sokajy Open Lehilahy. Voahosotra ho mpampidi-baolina mendriky ny fifaninanana kosa, teo amin’ny sokajy U 18 zatovolahy i Faniry Stéphano n°8 avy amin’ny klioban’ny 2Bc nahatafitra 123 isa, teo amin’ny sokajy Open vehivavy i Fanjanirina n°4 avy amin’ny klioban’ny 2Bc nahatafiditra isa 82, ary teo amin’ny sokajy Open lehilahy i Danivelo n°12 avy amin’ny Ascut nahatafiditra 113 isa.